Hordhaca kulanka xiisaha badan ee dhexmari doona Banaadir iyo Jubaland | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Hordhaca kulanka xiisaha badan ee dhexmari doona Banaadir iyo Jubaland
Hordhaca kulanka xiisaha badan ee dhexmari doona Banaadir iyo Jubaland
Posted by: radio himilo July 22, 2016
Kulanka ugu horeeya kulamada bug baxa ee afar dhammaadka cayaaraha gobollada dalka ayaa galabta lagu cayaari doonaa bugcadda Banaadir ee degmada Cabdi Casiis.
Cayaartan ayaa dhexmari doonta marti geliyaasha gobolka Banaadir iyo gobolka Jubaland oo kamid ah afartii gobol ee heerkan soo gaaray.
Banaadir ayaa booska koowaad ee Group A kusoo baxday iyadoo soo urursatay afar dhibcood, halka Jubaland ay booska labaad kaga soo baxday Group B xilli ay la timid saddex dhibcood.
Banaadir wax guuldarro ah cayaarahan kama soo gaarin Kulankii ugu horeeyay waxa uu la cayaaray 15-07-2016 xulka kubbadda cagta Koonfur Galbeed kulan Cayaareed ku soo idlaaday 5-0 oo ay guusha raacday wiilasha Xulka kubbadda cagta gobalka Banaadir, Kulankii labaad waxa ay la dheeleen wiilasha Xulka Puntland 19-07-2016 xilli kulankaas uu ku soo idlaaday 2-2.
Jubaland kulankii kowaad waxa ay la cayaartay xulka kubbadda cagta Hiiraan/Sh.Dhexe 16-07-2016 kulankaas waxaa lagu garaacay 2-1, kulankii labaad waxa ay la cayaareyn wiilasha Galmudug iyagana waxa ay kaga badiyeen 2-1 oo ay guusha raacday Jubaland.
Labadan xul ayaana intii ay cayaarayeen soo bandhigay kubbad heersare ah, mana jirto koox loo saadaalin karo inay soo bixi karto, iyadoo laga rabo in koox kamid ah ay timaad kama danbeysta cayaarahaan oo maallinta Isniinta ah lasoo gebagabeyn doono.
Kulanka galabta ayuu soo geli doonaa saacadda geeska Afrika marka ay tahay 04.00 galabnimo.
Previous: Dadka Dhafra habeenkii oo noqday kuwa ku guuleysta nolosha
Next: Jubaland oo gool ku laadyo ku reebtay Banaadir iskana xaadirisay Final + Sawirro